डी मारियाले किन बनाए कोपा अमेरिका ट्रफीकै ट्याटू ? यस्तो रहेछ कारण – ramechhapkhabar.com
डी मारियाले किन बनाए कोपा अमेरिका ट्रफीकै ट्याटू ? यस्तो रहेछ कारण
अर्जेन्टिनाले कोपा अमेरिका २०२१ को उपाधि जितेपछि अर्जेन्टिनाका मिडफिल्डर एन्जल डी मारियाले आफ्नो शरीरमा एउटा ‘ट्याटु’ थपेका छन् । उपाधि जितेपछि डी मारियाले आफ्नो बाँया तीघ्रामा ट्रफीकै ट्याँटु खोपेका हुन्।
मारियाले सामाजिक सञ्जाल इन्टाग्राममा ट्याँटु देखाउँदै लेखेका छन्, ‘आखिर त्यो दिन पनि आयो, मैले एक ट्रफी आफ्नो शरीरमा बनाउने वाचा गरेको थिएँ, जसलाई म आफ्नो शरीरमा जीवनभरि नै राख्न चाहन्थेँ।’
ब्राजिलसँग भएको कोपा अमेरिकाको फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनालाई उपाधि दिलाउन डी मारियाले नै निर्णायक गोल गरेका थिए । गत आइतबार आयोजक राष्ट्र ब्राजिललाई उसैको मैदानमा १–० गोलले हराउँदै अर्जेन्टिनाले २८ वर्षे उपाधिविहीन यात्राको अन्त्य गरेको थियो।
डी मारियाले ४७ औँ संस्करणको कोपा अमेरिकामा ६ खेल खेलेका थिए। जसमा उनले एक गोल गरेका थिए । तर उनको एक गोल नै अर्जेन्टिनालाई उपाधि जिताउन निर्णायक बनेको थियो । डी मारियाले अर्जेन्टिनी सिनियर टिमबाट पहिलो उपाधि जितेका हुन्। यसअघि उनले सन् २००७ मा यु–२० विश्वकपको उपाधि जितेका थिए।
कप्तान धवन र किशनको अर्धशतक, श्रीलंका ७ विकेटले पराजित
काठमाडाैं- कप्तान शिखर धवन र इशान किशनको अर्धशतकमा भारतले पहिलो ओडिआई खेलमा श्रीलंकालाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ। जितको लागि २ सय ६३ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको भारतले ३६.४ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। योसँगै भारतले तीन ओडिआई खेलमा १–० को अग्रता लिएको छ।
धवन ९५ बलमा ६ चौका र १ छक्कासहित ८६ रनमा अविजित रहे। यता, इशान ४२ बलमा ८ चौका र २ छक्कासहित ५९ रनमा आउट भए। यस्तै, पृथ्वी शाले २४ बलमा ९ चौकासहित ४३ रन बनाए भने सूर्यकुमार यादव ३१ रनमा अविजित रहे। उनले २० बलमा ५ चौका प्रहार गरेका थिए।
मनिष पाण्डे २६ रनमा आउट भए। श्रीलंका स्पिनर धनन्जय डि सिल्भाले सर्वाधिक २ विकेट लिए। लक्शान सन्दकनले एक विकेट लिए। त्यसअघि घरेलु मैदान प्रेमाडासा स्टेडियम कोलोम्बोमा टस जितेर ब्याटिङ गरेकाे श्रीलंकाले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै २ सय ६२ रन बनाएको थियो।
श्रीलंका चामिका करुणारत्ने सर्वाधिक ४३ रनमा अविजित रहे। उनले ३५ बलमा १ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै, ५० बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरेका कप्तान दासुन शनाका ३९ रनमा आउट भए।
चरिथ असलंका ३८, ओपनर अविष्का फ्रेनान्डो ३२ र मिनोद भानुका २७ र भानुका राजपक्षे २४ रनमा आउट भए। भारतका लागि कुलदीप यादव, युजभेन्द्र चहल र दीपक चाहरले २/२ विकेट लिए। यता, हार्दिक र क्रुनाल पान्ड्याले १/१ विकेट लिए।